သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၂) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on March 14, 2014 at 11:35 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ယနေ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် အစီအစဉ်မှာ ကဲန်ညာအစိုးရက ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ကားဟောင်းတွေကို ဆိပ်ကမ်းမှာပဲသိမ်းလိုက်ပြီးသည် ဖျက်ဆီးပစ်မယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကို ဖတ်ပြီး မှတ်သားဖွယ် ဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာကြပါမယ်။
Text source - http://www.bbc.co.uk/news/blogs-news-from-elsewhere-26529736
strict import rules = တင်းကျပ်သောသွင်းကုန်စည်းမျဉ်းများ
seize = တားမြစ်သည်၊ (ရဲစသည်တို့မှ) သိမ်းသည်၊ ဖမ်းဆီးသည်။ (seized at the port = ဆိပ်ကမ်းတွင်သိမ်းလိုက်သည်)
flout = ဆန့်ကျင်သည်။ မထီမဲ့မြင်ပြုသည်။ (... those flouting regulations = စီးမျဉ်းစီးကမ်းများကို မထီမဲ့မြင်ပြုသည်)
Ethics and Anti-Corruption Commission = လူကျင့်ဝတ်နှင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကော်မရှင်
unclear = မရှင်းလင်း၊ မသဲကွဲ
Kenya Revenue Authority = ကဲန်ညာနိုင်ငံ အခွန်အာဏာပိုင်အဖွဲ့
appetite = စားချင်စိတ်။ အာသာ။ ရမ္မက်။ တဏှာ။ ဆန္ဒ။ အလို။ တောင့်တမှု။ အာသီသ။ (The appetite for Japanese cars .... = ဂျပန်နိုင်ငံလုပ်ကားများကို သုံးခြင်သောဆန္ဒ)
bogus = အတုအယောင်
ကွက်လပ်များကို a, an, the စသည်ဖြင့် သင့်လျှော်သော article ဖြည့်ပါ။
(1)__________ Kenyan government is planning to destroy thousands of foreign cars because they don't meet strict import rules, it appears.
More than 2,000 Japanese cars worth over 4bn Kenyan shillings (Â£27.8m; $46.2m) have been seized at (2)__________ port in Mombasa because they were more than eight years old when they arrived in (3)__________ country, (4)__________ Daily Nation newspaper reports. Destroying (5)__________ vehicles will "send (6)_______ strong message to those flouting regulations", says Ethics and Anti-Corruption Commission chairman Mumo Matemu.
Kenya is (7)_________ big market for second-hand Japanese cars, because both countries drive on (8)__________ left. In 2013, nearly 52,000 vehicles were exported to Kenya, Japanese customs figures show.
Kenya retains (9)__________ services of (10)________ independent Japanese company to inspect all used vehicles heading to its ports. But (11)__________ government says it is unclear how (12)__________ 2,000 seized cars were cleared by (13)__________ Kenya Revenue Authority, (14)__________ country's tax agency.
(15)__________ appetite for Japanese cars means that Kenyans are frequently warned about bogus companies operating on (16)__________ internet, either dealing in illegal cars or simply stealing customers' money.
(1) The, (2) the, (3) the, (4) the, (5) the, (6) a, (7) a, (8) the, (9) the, (10) an
(11) the, (12) the, (13) the, (14) the, (15) The, (16) the